Wasiirka: Iran iyo Georgia waa inay dhexgalaan nidaamyada bangiga si kor loogu qaado dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Georgia War Cusub » Wasiirka: Iran iyo Georgia waa inay dhexgalaan nidaamyada bangiga si kor loogu qaado dalxiiska
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Georgia War Cusub • Wararka Dowladda • Wararka Iiraan • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Iiraan ayaa soo jeedisay in la isku daro nidaamyadeeda kaarka bangiga iyo kuwa Georgia si loo xoojiyo dakhliga dalxiiska ee labada dal.
Soo jeedinta waxaa sameeyay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyada ee Iran Masoud Karbasian kulan uu la qaatay xubnaha baarlamaanka Georgia ee booqashada ku jooga.
"Aasaaska iskaashiga bangiyada ee labada dal waxaa loo dhisi doonaa qaab u ogolaanaya isticmaalka kaararka bangiga ee Iran iyo Georgia dadka ku nool waddamada midba midka kale," ayuu yiri Karbasian.
Bishii Diseembar ee la soo dhaafay, waxaa lagu dhawaaqay halkan in Iran iyo Ruushka ay ku jiraan nidaamka tijaabada si ay u dhexgalaan nidaamyadooda lacag bixinta bangiyada.
"Waxaa jiri doona kaararka bangiga ee caadiga ah oo ay isticmaali karaan macaamiisha dibedda," ayuu yiri Davood Mohammad Beigi, oo ah agaasimaha Waaxda Nidaamka Lacag Bixinta ee Bangiga Dhexe ee Iran.
Nidaamka loo dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha si loogu dhexgalo nidaamyada lacag bixinta ee caalamiga ah wuxuu qaadan doonaa ugu yaraan 10 bilood, ayuu raaciyay.